Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.4.1 falanqaynta xog ururinta iyo xog: itimaalka sampling
Miisaanka tirtireyso karaa dhabtii si ula kac ah ay keentay habka ururinta.
Baarka itimaalka waa kuwa halkaas oo dadka oo dhan ay leeyihiin yaqaan, aan eber-suuragalka ah ee ka mid noqoshada, iyo design fudud sampling jaaniska waa mid fudud sampling random halkaas oo qof kasta uu leeyahay itimaalka siman ee noqoshada. Marka jawaabaha lagu doorto via sampling random fudud oo dil kaamil ah (tusaale ahaan, ma baadi caymiska iyo ma non-jawaab), ka dibna ku qiimaysay waa sahlan, sababtoo ah saamiga-on doonaa celcelis-ahaan version a Ghadafi dadweynaha.
sampling Simple random waxaa dhif ah loo isticmaalo si dhab ah, si kastaba ha ahaatee. Saas ma aha, cilmi-kac ah ay doortaan dadka qaba itimaalka aan qummanaynu of daro si loo yareeyo kharashka iyo kordhiyo saxnaanta. Marka cilmi-kac ah ay doortaan dadka ixtimaallada kala duwan oo ka mid noqoshada, markaas hagaajin loo baahan yahay in ay tirtireyso dhabtii ay keento habka ururinta. In si kale loo dhigo, sida aan guud ka muunad ku xiran tahay sida saamiga loo doortay.
Tusaale ahaan, dadweynaha Survey hadda ah (CPS) waxa loo isticmaalaa by Dowladda Mareykanka in la qiyaaso heerka shaqo la'aanta. Bil kasta oo ku saabsan 100,000 oo qof ayaa la waraystay, mid fool-ka-fool ah ama telefoonka, iyo natiijada waxaa loo isticmaalaa si loo soo saaro heerka shaqo la'aanta lagu qiyaasay. Sababtoo ah dowladda uu rabo in la qiyaaso heerka shaqo la'aanta ee gobol kasta, ma samayn karo tusaale fudud kadiska ah ee dadka waaweyn maxaa yeelay dhali doono jawaabaha aad u yar in dalalka leh dadka yar yar (tusaale ahaan, Rhode Island) oo aad u tiro badan ka dalalka la dadka waaweyn (tusaale ahaan , California). Halkii, tijaabada CPS dadka gobolada kala duwan ee heerarka kala duwan, habka loo yaqaan sampling heerarka la itimaalka aan qummanaynu ee doorashada. Tusaale ahaan, haddii CPS u doonayay 2,000 jawaabeyaasha per gobolka, ka dibna dadka waaweyn ee Rhode Island leeyihiin lahaa 30 jeer ka itimaalka ee ka mid noqoshada dadka waaweyn ee California (Rhode Island, 2,000 oo ka jawaabay per 800,000 oo dadka waaweyn vs California: 2,000 oo jawaabeyaasha per 30.000.000 dadka waaweyn). Sida aynu arki doonaa ka dib, noocan oo kale ah sampling la itimaalka aan qummanaynu dhacaya ilo online xogta aad, laakiin ka duwan CPS ah, hab sampling waxaa sida caadiga ah ma yaqaan ama ay gacanta ku cilmi.
Marka la eego design sampling ay, CPS ma aha si toos ah wakiilka Mareykanka, waxaa ka mid ah dad aad u tiro badan oo ka Rhode Island iyo aad u yar ka soo California. Sidaa darteed, waxa uu noqon lahaa caqli lahayn in la qiyaaso heerka shaqo la'aanta ee dalka iyadoo heerka shaqo la'aanta ee tusaalaha ah. Halkii celceliska tijaabada, waxaa wanaagsan in la qaato celceliska a miisaan leh, halkaas oo miisaanka ku warsan xaqiiqada ah in dadka ka soo Rhode Island waxay u badantahay in lagu daro badan dadka ka soo California. Tusaale ahaan, qof kasta oo ka soo California noqon lahaa upweighted- ay tirin lahaa ka badan qiyaasta-iyo qofka kasta oo ka Rhode Island la lahaa downweighted-ay tirin lahaa yar ee qiyaasta. In jiritaan, lagu siiyo cod dheeraad ah si ay dadka si aad u yartahay in ay bartaan oo ku saabsan.
Tusaale ahaan toy Arrintan ayaa muujineysa dhibic muhiim ah, laakiin caadi ahaan is fahmi waa, tusaale uma baahna in ay noqon version a Ghadafi ee dadka si ay u soo saaraan qiyaas wanaagsan. Haddii la og yahay ku filan oo ku saabsan sida xogta la soo ururiyay, ka dibna warbixin la isticmaali karo marka qiyaasaha ka shaybaarka. Habka aan kaliya ku tilmaamay-oo aan ku tilmaami xisaab ee farsamo lifaaqa-dhaco si ballaadhan loogu gudahood dhismeedka classical sampling itimaalka. Haddaba, waxaan ku tusi doonaa sida fikrad isla lagu saleyn karaa tijaabada non-itimaalka.